प्रधानमन्त्रीको अपरेशनमा कुन-कुन चिकित्सक खटिएका थिए ?
काठमाडौं, २१ फागुन। बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा दर्जन बढी विशेषज्ञ चिकित्सक खटिएका थिए।
प्रत्यारोपणको शल्यचिकित्सा टोलीमा प्रा.डा. उत्तम कुमार शर्मा, प्रा.डा. प्रेम ज्ञवाली, भारतीय चिकित्सक प्राडा अनन्तकुमारलगायतको टोली खटिएको थियो। त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण चिकित्सा टोलीमा प्रा.डा. दिव्यासिंह शाह, डा. महेश सिग्देल, डा मुकुन्द काफ्ले, डा. नवीन नेपालीलगायतको टोली सहभागी रहेको थियो।
यस्तै एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरतर्फ डा. अनिल श्रेष्ठ र प्रा.डा. सुवास कर्माचार्य लगायतको टोलीले सहयोग गरेको थियो। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशन प्रेम कृष्ण खड्गाले ओलीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बुधबार अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
यस्तै खड्गाले अहिले ओलीको प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न थालिसकेको पनि बताए। त्यस्तै ओलीका सबै मुख्य सूचकांकहरु राम्रो अवस्थामा रहेको पनि खड्गाले जानकारी दिए। उनलाई प्रत्योरापण उपचार कक्षमा राखी उपचारलाई निरन्तरता दिइने पनि चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
यस्तै मिर्गौला दान गर्ने ओलीकी भाञ्जी समीक्षा संग्रौलाको पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। ओलीको २०६४ मा पहिलोपटक भारतको दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउँदा डा. अनन्तकुमारले नै गरेका थिए।